हिस्टरोस्कोपी विधि किन प्रयोग गर्ने? « Kalinchowk Online – Nepal's Leading News Portal
हिस्टरोस्कोपी विधि किन प्रयोग गर्ने?
जम्मा पढिएको : 179
प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०७६, आईतवार ०९:१२
डा. रंगिना शाह
स्त्रीरोगको उपचारका लागि प्रयोगमा ल्याइएको नयाँ प्रविधि हो, हिस्टरोस्कोपी । नेपालमा यसको प्रयोग हुन थालेको धेरै भएको छैन । हिस्टरोस्कोपी ल्याप्रोस्कोपीजस्तै दुरबिनको माध्यमबाट शल्यक्रिया गर्न बनाइएको प्रविधि हो ।
हाम्रोमा असुरक्षित गर्भपतनले पनि पाठेघरको समस्या निम्त्याइरहेको पाइन्छ । पटक–पटक गर्भपतन गराउँदा बच्चाको सानो हड्डी पाठेघरमा अड्किएर बसेको पाइन्छ । जुन एकदमै कम प्रतिशतमा हुने भए पनि जटिल समस्या हो । भिडियो एक्सरे गर्दा नदेखिने यस्ता सामान्य कारणले जटिल समस्या निम्त्याइरहेको छ, यसका लागि हिस्टरोस्कोपी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
खासगरी पाठेघरको समस्या, जस्तैः रगत बगेमा, बायोप्सी, बाँझोपन, पाठेघरको ट्युमर, पाठेघरभित्र पर्दा, बच्चा नबसेमा वा पटक–पटक खेर गएमा, पाठेघरभित्र मासु पलाएमा, पाठेघरको कुनै पनि समस्या भएमा हिस्टरोस्कोपी प्रयोग गरिन्छ । पाठेघरको मुखबाट २.९ एमएमको सानो दुरबिन पठाएर भित्रको अवस्था हेर्न सकिन्छ । जसले भित्रको अवस्था ठूलो पर्दामा देखाइदिने हुँदा उपचारका लागि सहज हुन्छ ।
सामान्यतया रगत धेरै बगेको अवस्थामा हिस्टरोस्कोपीको प्रयोग गरिन्छ । जस्तै बायोप्सी गर्दा, औषधिको प्रयोग गर्दा पनि ठीक नहुने अर्थात् कारण पत्ता नलगाउन सकेको अवस्थामा हिस्टरोस्कोपी राम्रो माध्यम हो ।
सामान्यतया रगत धेरै बगेको अवस्थामा हिस्टरोस्कोपीको प्रयोग गरिन्छ । जस्तै, बायोप्सी गर्दा, औषधिको प्रयोग गर्दा पनि ठीक नहुने अर्थात् कारण पत्ता नलगाउन सकेको अवस्थामा हिस्टरोस्कोपी राम्रो माध्यम हो । कतिपय अवस्थामा पाठेघरको दुईवटै नली बन्द हुन सक्छन्, यस्तो अवस्थामा गर्भ रहँदैन । हिस्टरोस्कोपीको माध्यमबाट उक्त नली खोल्न सकिन्छ, जसलाई मेडिकल भाषामा ‘ट्युबर क्याबुलेसन’ भनिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा कपर टीको प्रयोग गर्दा विभिन्न कारणले यसको टुक्रा अड्किएर बसेको हुन्छ । यस्तो समस्या धेरै महिलामा देखिएको पाइन्छ । जुन सामान्य उपचारबाट सम्भव हुँदैन । अन्य उपचार अपनाउँदा थप जटिलता आउने हुदा हिस्टरोस्कोपी एकदमै उपयोगी हुन्छ ।